Akunjalo ngokuvamile udinga ukuhlela ifayela ngefomethi echazwe ngezansi, kodwa, uma kwenzeka ngempela, kubalulekile ukwazi ukuthi ukuhlela PDF format. Kukhona ekhethekile izinhlelo isihleli ukuhlela umbhalo, amabhukumaka, ukuphawula, ukwenza amalebuli, ukusika noma ukudedela izingcezwana, engeza izithombe, futhi ukwenza ezinye izenzo nale format ethandwayo.
Ifomethi hlela PDF: abahleli ethandwa kakhulu
Ukuze wenze lokhu, ungasebenzisa omunye abahleli aphakanyisiwe okwengeziwe :: Adobe Acrobat Pro, Jaws-PDF Editor, VeryPDF Umhleli, Foxit-PDF Editor, noma enye indlela efanayo. Ungalanda isicelo kusuka installyashki amasayithi olusemthethweni noma Uyowafuna usebenzisa injini yokusesha. Kusukela esibonakalayo zonke izinhlelo okuhlongozwayo zifana ngezindlela eziningi, kungenzeka ukuba sicabangele phezu isibonelo kusebenziseka kalula kakhulu Foxit-PDF Editor, okuyinto ikuvumela ukuba uhlele amafayela PDF.
Ngemuva kokuqala uhlelo udinga ukuvula ifayela PDF usebenzisa imenyu ezifanele. Uma idokhumenti ivulekile, esibonakalayo hlelo uzobe ingasebenza modified, kuyoba main yamathuluzi futhi kumenyu yokuzula. Kule modi, ungenza ngokungeza amakhasi amasha, hlela amabhukumaka, umbhalo, engeza ezinye izithombe nokunye okuningi. Uma uchofoza kabili wena ekhasini evulekile idokhumende, khona-ke uyobona imodi idokhumenti-ukuhlela, afana Photoshop isikhombi. Le modi ikuvumela ukuba enze ukuhlela ngendlela efanayo njengoba isithombe uhlelo ngenhla. Ibha yamathuluzi inikeza kukhethwa ezimpahleni ezingasuki phansi kucutshungulwa Vector izithombe. Uma uchofoza imenyu kwento Gcina bese Vala Image Editor, ungakwazi ukuphuma mode ukuhlela isithombe. Umphumela izogcinwa emva ngokucindezela inhlanganisela efanayo ukhiye njengasezulwini noma isiphi esinye isicelo.
Omunye umhleli elula Nitro PDF Reader, okuyinto ikuvumela ukuba uhlele amafayela PDF. Ngaphezu ukuhlela isicelo ikuvumela ukuguqula ifayela kwanoma iyiphi idokhumenti ukuthi kungaba inyatheliswe. Ukuguqula PDF, ungavele Ukuhudula bese uphonsa isithonjana Uhlelo oyifunayo into.
Lapho ufaka lolu hlelo, it is ngokuzenzakalelayo wanezela ohlwini amaphrinta etholakalayo. Uma ukhathazekile mayelana nalolo daba kuka ukuhlela pdf, kufanele wazi ukuthi lolu hlelo has esinye isici esibalulekile - ikhono ufaka umbhalo wakho ngqo endaweni efanele futhi ashaye okuthé xaxa. Ungakwazi ukufaka umfanekiso isignesha, okwakubekelwa isikeni. Ngaphezu okungenhla, lolu hlelo lokusebenza ikuvumela ukuba ngokushesha ukucinga amazwi embhalweni.
Isithasiselo Adobe Acrobat futhi likuvumela ukuhlela ifomethi PDF, nje lo msebenzi zigutshuzelwe kuwo. Kulesi isicelo, wena zithole ithuba ukushintsha umbhalo kuphela. Ngo Adobe Acrobat, ungakwazi ukufeza ukuhlela kwedokhumenti yonke ngesikhathi esisodwa, esikhundleni ikhasi yikhasi, njengoba kunjalo kwezinye abanye abahleli. Kumele ozifakile zonke amafonti elisetshenziswe embhalweni ukuze uthole ikhono ukuhlela. Ukuze uqale, kudingeka ukuvula isicelo ifayela lakho PDF. Ngemva kwalokho, kumelwe iya kuzilungiselelo, ukhethe Ukuhlela okuthuthukile, bese ayeke endaweni TouchUp Umbhalo ithuluzi. Manje ungakwazi zinezimoto kwemaphutsa.
Uma ungacabangi lolu lwazi ukuqedela impendulo yombuzo othi lokho ukuhlela pdf, kungenzeka sikunikeze okunye okukhethwa kukho. Mahhala-PDF umhleli kuyinto khulula umhleli inthanethi. Le sevisi akudingi ukuba ufake lutho kukhompyutha yakho. It ivumela ukuhlela ngokuhlanganyela, ngakho ngamunye abasebenzisi akudingeki zivuleka ngokwabo noma yiliphi ifayela phezu kwayo ukusebenza ndawonye.
Ngokuvamile, kufanele kucace ukuthi onjalo hlela format ilula.
Kuyini izinga TS futhi yiziphi izinzuzo zayo?
Uhlelo has inkumbulo obanele: indlela yokulungisa?
Ukunwetshwa i-odt - kuyini futhi kungani?
I ovulekile img: isixazululo esilula
Sihumusha amabhayithi ukuba amakhilobhayithi
Yikuphi isikhwama ukugqoka ekuphileni kwansuku zonke? Ibhizinisi nezithombe nsuku zonke. Amathiphu izesekeli ngokukhetha
Incwadi Viktora Gyugo "Cosette." isifinyezo
Ovum ngaphandle umbungu. Ingabe iqanda elivundisiwe ukuze ingabi nowakhileyo umbungu?
Lombhalo ucashunwe ebhukwini of Belladonna - ikhambi izifo eziningi
Ibhulukwe: yini okufanele uyigqoke?
Sibhedlela Anapa "Blue Wave": ukuphumula okuhle futhi ukwelashwa okuyikho